Gudoomiyihii Maxkamada Sare ee Maamulka Somaliland oo Xilki laga Qaaday – Radio Daljir
Abriil 19, 2015 1:15 b 0
Axad, Abriil 19, 2015 (Daljir) — Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa xalay xilkii ka qaaday guddoomiyihiii maxkamadda sare ee Somaliland, Dr. Yuusuf Ismaaciiil Cali.
Silaanyo ayaa xil ka qaadistaasi ku sababeeyey inay cabashooyin badan ka yimaadeen guddidd cadaaladd,isla markaana lagu eedeeyey inuu shaqadiisii ka soo bixi waayey.
“Madaxweynaha Somaliland,. Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu digreeto madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/M/XERM/249-3197/042015 xilkii uu qaranka u hayey kaga qaaday Guddoomiyihii Maxkamadda Sare, isaga oo madaxweynuhu dib ka soo magacaabi doona masuulkii buuxin lahaa gudoomiyenimada.”ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Siilaanayo.
Madaxweynuhu wuxuu intaas ku daray. “In madaxweynuhu markuu arkay Warbixintii iyo talo soo jeedintii Guddida Cadaaladda, taasoo tilmaamaysay in ay adagtahay wada shaqaynta Gudoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Guddida Cadaaladdu;
Markuu Arkay: Cabashooyinka is-dabajoogga ah ee shacabku ka muujiyeen Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Garsoorka Dalka;
Markuu Yaqiinsaday: In loo baahan-yahay isbeddel lagu sameeyo Garsoorka & Cadaaladda Dalka; Wuxuu Go’aansaday:
In laga bilaabo taariikhda maanta uu xilkii guddoomiyenimo ee maxkamada sare ee Somali-land ka qaado Mudane, Yuusuf Ismaaciil Cali.” Ayaa lagu yidhi Wareegtadaasi.
Wareegtadan ayaa lagu sheegay in uu soo buuxin doono kaalinta uu ka qaaday gudoomiyihii Maxakamada Sare, hasayeeshee labada gole ee Guurtida iyo wakiilada uma uu gudbin in ay xilka ka xayuubiyaan.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynuhu marka uu soo jeediyo inuu xilka ka qaaday waxay mari doontaa fadhi wada jir ah oo ay yeeshaan labadda gole baarlamaan kuwaas ogolaan kara ama diidi kara xil ka qaadistaasi.